Igbo, John: Lesson 056 - Jizọs bu ìhè nke uwa (Jọn 8:12-29) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 056 (Jesus the light of the world)
21 Ya mere Jisus siri ha ọzọ, Mu onwem nāla, unu gāchọm, unu gānwu kwa nime nmehie nile unu. 22 Ya mere ndi-Ju siri, Ọ gēb͕u onwe-ya, si, Ebe Mu onwem nāla, unu onwe-unu apughi ibia?
Jizọs maara na ndị na-eje ozi n'ụlọ nsọ gbara ya gburugburu. O jiri aka ya kwuo ihe dị mkpa nke ọdịnihu, "oge awa m nwụrụ dị nso, m ga-ahapụ ụwa a ma ị gaghị enwe ike ịchụ m." Ị bụghị onye na-egbu m dị ka atụmatụ nke gị si dị. oge m ga-apụ."
Ma mu onwem gesi n'ílìm bilie n'ugwu nkume, mechi kwa uzọ: unu gāchọm n'efu, ma unu achọtaghm, m'gārigokuru Nnam, unu agaghi-ama kwa ya: n'ihi na unu onwe-unu juwom, bú Nwa-aturu Chineke ọ bughi kwa Onye-nb͕aputa nke madu ka unu gātukwasi obi: unu gāla n'iyì n'ihi nmehie-unu. Jizọs ekwughị, "Ị ga-anwụ n'ime mmehie gị." Mmehie anyị dị iche iche na-emeghị ka anyị bụrụ ikpe ọmụma mbụ anyị, kama ọ bụ àgwà anyị na Chineke, okwukwe anyị bụ mmehie anyị.
Ndị Juu ghọtara na Jizọs na-ekwu banyere ọpụpụ ikpeazụ ya, mana ọ ghọtaghị àmà ya na ọ ga-alaghachikwuru Nna ya. Ma ha chere na n'ọgụ ya na ndị Farisii na ndị ụkọchukwu ya na njedebe nke ume ya. Ọ dịghị ihe fọdụrụ ya ma igbu onwe ya. Hell ma ọ bụ mbibi ọ ga-ekpochapụ ya dị ka igbu onwe ya? Ndị Juu chere ma ọ bụ kwuo na ha agaghị eketa òkè ahụ n'ihi ezi omume ha. Ma mgbe Rom nọchibidoro Jerusalem n'afọ 70 AD, ọtụtụ puku ndị Juu gburu onwe ha site na ụnwụ na obi nkoropụ.
23 O we si ha, Unu onwe-unu si n'okpuru. M si n'elu. Ị bụ nke ụwa a. Abụ m nke ụwa a. 24 Ya mere, asim unu, na unu gānwu na nmehie nile unu; n'ihi na ọ buru na unu ekweghi na Mu onwem bu Ya, unu gānwu na nmehie nile unu.
Jizọs kwusara na ógbè Chineke dị adị n'ezie karịa ụwa ọjọọ anyị. Anyị niile si na ụrọ, nke jupụtara n'echiche ọjọọ. Mkpụrụ nke ekwensu na-amịpụta mkpụrụ rere ure. Mmadu nke anumanu apugh ighota ala eze kama o nwere ike iche na odidi ya.
Kraist abughi nke uwa ayi; Mkpụrụ obi ya si n'aka Nna m. O tinyere oche nke Nna ya n'elu ma ọ bụghị n'àgwà obodo. Dika nkpatu di elu ka eweda elu ayi, otua ihe nro nke nmehie neme ka ayi ghara iru Chineke nso. Ụwa anyị bụ ụlọ mkpọrọ nke anyị na-apụghị ịgbanahụ. Anyị bụ ụmụ nke ebe anyị na-ajụ ido onwe anyị n'okpuru ịhụnanya Chineke. Ndụ anyị jupụtara na mmehie. N'oge a Jisos jiri "nmehie" me ihe otutu, ebe obu na site na nnupu isi megide Chineke otutu nmehie na ihe ojoo bilitere. Anyị dị ka onye ekpenta jupụtara n'ọkụ na ọnyá. Dị nnọọ ka onye ọjọọ ahụ ji nwayọọ nwayọọ nwụọ, ọ bụ ezie na ọ ka dị ndụ. N'otu aka ahụ, mmehie na-ebibi mmadụ. Anyị ga-anwụ n'ihi na anyị emehiela. Gịnị bụ mmehie? Obu ekwegh ekwe, n'ihi na onye ahu ekwere na Kraist di ndu rue mgbe ebighebi - ọbara nke Okpara Chineke neme ka ayi di ọcha site na nmehie. Ike ya na-eme ka akọnuche anyị dị ọcha ma dozie echiche anyị. Ma onye ọ bụla nke na-anọpụ iche na Kraịst, na-ahọrọ ọnwụ, na-anọgide n'ụlọ mkpọrọ nke mmehie, na-echere ikpe. Okwukwe nke Kraist na-eme ka anyi ghara iwe iwe Chineke.
Ònyezi bụ Jizọs a nke chọrọ okwukwe na ya? Ozo ozowara onwe ya "Mu onwem bu Ya" (Jon 6:20 na 8:24). Ya mere, o achikota akuko nile nke onwe ya. Ọ kpọrọ onwe ya Onye nke eziokwu, Chineke dị ndụ, Onye Nsọ nke kpughere Onwe ya nye Mozis n'ọhịa nke nwere okwu ahụ bụ "Abụ m" (Ọpụpụ 3:14, Aịsaịa 43: 1-12). N'ebe ọ bụla ọzọ bụ nzọpụta. Onye obula obula mara amaokwu abua a, ma o kwusiri ike ikwuputa ha, iji zere iji aha Chineke eme ihe efu. Ma Jizọs kpọrọ onwe ya site na ha n'ihu ọha. Ọ bụghị naanị Kraịst bụ Ọkpara Chineke, kamakwa Jehova, Chineke n'eziokwu.
Ọ bụ onye kachasị nke Oziọma ahụ. Kraist bu Chineke n'anu aru. Onye kwere na ya na-adị ndụ, ma onye na-ajụ ya ma na-etinye aka na ya ikike adịghị onwe ya mgbaghara. Okwukwe ma ọ bụ ekweghi ekwe kpebiri ọdịnihu mmadụ.
Gịnị ka okwukwe na Onye kpọrọ onwe ya "Abụ m Ya" pụtara?